FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ESPANIÔLA COCKER ANGLISY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Espaniôla Cocker anglisy
Eddie the English Cocker Spaniel amin'ny 2 1/2 taona— 'Eddie dia Cocker milamina tokoa. Alika miasa tsara izy, nefa mbola tia fandefasana. '
Lisitry ny Dog Cocker Spaniel Mix Dogs
Ny English Cocker Spaniel dia alika antonony sy matevina. Arohina ny loha ary toa somary fisaka raha jerena avy eo amin'ny sisiny. Ny molotra dia mitovy halava amin'ny loha misy fijanonana voafaritra. Mainty na volontany ny orona miankina amin'ny lokon'ny palitao. Mihaona amin'ny hety na manaikitra ny nify. Ny maso antonony sy boribory lavalava dia volontany mainty na hazel amin'ny alika miloko aty. Ampidinina ambany ny sofina ary mihantona lava voasarona volo landy na misy volo. Lalina ny tratra ary mahitsy ny tongotra eo alohany. Ny topline dia saika avo lenta, somary mitongilana kely hatrany aloha mankany ambadiky ny alika. Voatsindrona matetika ny rambony. Naoty: tsy ara-dalàna ny fametahana rambony any amin'ny ankamaroan'ny faritra eropeana. Ny ranjo toa ny saka dia misy rantsantongony mafy. Ny volo dia lava halavan'ny vatana fa fohy sy tsara eo an-doha. Misy volom-borona amin'ny sofina, tratra, kibo ary tongotra. Ny loko palitao dia misy loko mainty, aty na mena na parti mandoko ny fotsy misy marika mainty, aty na mena na manamarika. Loko maro no ekena, fa amin'ny tratrany kosa ny alika fotsy dia tsy azo ekena afa-tsy amin'ny tratra. Indraindray misy marika mena amin'ny alika mainty, aty na parti-loko. Ny alika miloko parti dia antsoina matetika hoe 'roan.' Misy roan manga izay parti mainty sy fotsy izay mifangaro amin'ny fotsy ny volo manome endrika manga azy. Ny volontsôkôlà volontsôkôlà, ny sôkôlà ary ny atiny dia volon'ondry fotsy sy fotsy izay misy volo volontany mifangaro ao anaty fotsy. Roan-boasary, henan-mena, na roan-frezy dia palitao mena sy fotsy miaraka amin'ny volo mena mifangaro amin'ny volo fotsy. Ireo palitao ireo indraindray dia misy teboka tan. Misy karazany roa ny Cocker anglisy: saha sy fampisehoana. Ny karazana seho dia manana palitao lava kokoa noho ny saha / ny karazany miasa.
Alika manan-tsaina, matanjaka ary matanjaka ny English Cocker Spaniel. Mavitrika sy mahaliana ary mahafinaritra, mahafinaritra, malemy paika, milalao ary tia olona, ​​tsara amin'ny ankizy izy ireo. Izy ireo dia sambo salantsalany, ary vonona sy faly mihaino ny tompony. Alika mpiara-miasa ambony. Amin'ny ankapobeny dia karazany mivoaka, maka mora amin'ny olon-tsy fantatra, ny olona sasany dia azo tahirizina nefa tsy ampy -piaraha-monina . Ity karazana ity dia mety amin'ny fianakaviana saka . Misy karazany roa, tsipika an-tsaha ary tsipika fampisehoana (dabilio). Ny karazan-tsaha dia nompiana ho an'ny asa fihazana sy fitsapana an-tsaha. Ny karazana dabilio dia namboarina ho fampisehoana fampifanarahana. Ireo karazana roa ireo dia mazoto ary mila fanatanjahan-tena isan'andro, fa ny tsipika an-tsaha kosa dia manana haavon'ny angovo avo kokoa, ary mila fanatanjahan-tena bebe kokoa aza. Ny haavon'ny fanapahana amin'ity karazany ity dia miovaova be na dia ao anatin'ny fako iray ihany aza. Mahatsapa ny feon'ny olona iray izy ireo ary tsy hihaino raha mahatsapa izy ireo fa matanjaka kokoa noho ny tompony izy, na izany aza dia tsy handray tsara ny famaizana henjana. Raha tsy ianao ilay karazan'olona afaka maneho rivotra voajanahary milamina, fa fahefana hentitra, dia aza hadino ny misafidy pup izay mora manaiky kokoa. Ny toetran'ny tsipika fampisehoana sy ny tsipika dia samy hafa be, miankina amin'ny fomba itondran'ny tompony ny alika sy ny ohatrinona ary ny inona karazana fanatanjahan-tena manome izy ireo. Ireo olona tsy raisina mandeha isan'andro , avela hino fa izy ireo dia alpha mihoatra ny olombelona sy / na izay raisina toy ny olombelona kely miaraka amin'ny tongotra efatra dia miafara amin'ny ambaratonga samihafa FITONDRANTENA ary / na olan'ny toetra . Ireo olona omena rafitra tsy miova , tony, fahefana henjana, miaraka nazava ny lalàna ary mandeha isan'andro izay anaovana ny alika tena eo anilany na ao aoriany ny olombelona manana toetra tsara.
Haavony: Lehilahy 15 - 17 santimetatra (38 - 43 cm) Vavy 14 - 16 santimetatra (36 - 41 cm)
Milanja: Lahy 28-34 kilao (13 - 16 kg) Vehivavy 26 - 32 pounds (12 - 15 kg)
ento mody ny alika kely mpiady boxer anao
Mora voan'ny aretin-tsofina. Mandritra ny fahavaratra dia tokony hozahana matetika ny sofina. Mihantona amin'ny tany toy ny ataon'izy ireo izy ireo, ary mety ho lasa mpitsindroka na burrs, izay matetika mahatonga ny marenina. Mora mahazo lanja dia aza be loatra.
Ny English Cocker Spaniel dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Manao izay tsara indrindra izy ireo amin'ny tokotany farafahakeliny farafahakeliny.
Ny English Cocker Spaniel dia mankafy fanatanjahan-tena betsaka araka izay azonao omena azy. Mila entina amin'ny a mandeha isan'andro , izay amboarina ny alika eo anilany na ao ambadik'ilay olona mitana firaka. Ny alika avela handeha eo alohan'ny olombelona dia mino fa voajanahary noho ny olombelona izy ireo, toy ny ao an-tsain'ny alika ihany, ny mpitarika ny kitapo no mandeha voalohany.
vavao mainty cur info
Ny famonoana sy fanosehana matetika ny palitao dia zava-dehibe. Ny karazana palitao dia miovaova ao anatin'ny karazany. Ny palitao sasany dia manana volo cottony be loatra ary mora mihombo, fa ny sasany kosa mahia kokoa noho ny silky sy fisaka ary tsy dia mora mihombo. Mandrosoa na shampooing maina raha ilaina. Hamarino ny sofina raha misy voa ahitra sy famantarana ny aretina. Diovy tsy tapaka ny savoka be loatra. Borosio ny volo amin'ny tongotra midina ambonin'ny rantsan-tongony ary alaivo amin'ny faladian'ny tongotra izy. Karakarao manodidina ny volony ny volony, fa tsy eo anelanelan'ny rantsantongony. Esory ny burrs sy ny korontana rehefa avy nilalao an-tsaha na ala ilay alika. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny English Cocker Spaniel dia iray amin'ireo spaniel tranainy indrindra fantatra. Fantatra tamin'ny voalohany ho toy ny amboa karazana spaniel ankapobeny izay nafarana tany Angletera taonjato maro lasa izay, ny alika dia nizara ho karazany spaniel fito samy hafa: ny English Springer , ny Cocker Spaniel , ny Clumber , ny Sussex , ny Welsh Springer , ny saha , ary ny Rano Irlandey . Ny Cocker sy Springer Spaniels dia niara-nivelatra, ary ny habeny ihany no nampiavaka azy ireo hatramin'ny 1892, rehefa neken'ny Kennel Club any Angletera ho karazana misaraka izy ireo. Tamin'ny 1946 dia neken'ny klioban'ny Kennel amerikana sy kanadiana ny English Cocker Spaniel ho karazany misaraka amin'ny Spaniel Cocker amerikana . Ny Cocker Spaniel dia alika mpihaza izay afaka miasa amin'ny toerana sarotra amin'ny tany mando sy maina. Tena tsara amin'ny fametahana sy famerenana lalao amin'ny vava malefaka. Mihaino tsara ny baiko. Ny anarana 'Cocker' dia avy amin'ny woodcock, vorona lalao nahafantarana ny alika tamin'ny alikaola. Ny sasany amin'ny talentan'ny English Cocker Spaniel dia mihaza, manara-dia, mamerina, mpiambina, mailaka ary fankatoavana mifaninana.
Ny Espaniôla Cocker Spaniels AJ (ankavia) sy Tommie Lacono tamin'ny herintaona
Tommie Lacono zanak'alika anglisy Cocker Spaniel
pitbull amerikana sy mix bulldog
Marmaduke dia Merle anglisy Espaniel Cocker Spaniel 3 taona
Bleki mizara ny sakafony amin'i Cikita saka saka akaiky azy indrindra.
Ny Cockers anglisy Kenny sy Blue— 'English Cocker Spaniels dia karazany vaovao ho ahy ary faly aho nahita ny English Cocker ho toy ny karazany iray hanampy ny fianakaviako. Ireto alika kely ireto dia mahatsikaiky sy mahafinaritra, na dia voatokana amin'ny olona sy toe-javatra vaovao aza indraindray. Mifanaraka haingana izy ireo ary toa mankafy alika hafa, milomano sy mitolona. Nanomboka tamin'ny iray aho fa hitako fa toa manirery kely ny Cocker ahy na dia manana alika hafa aza aho. Rehefa nanomboka nitondra mpiray tam-po tamiko tany amin'ny daty filalaovana aho dia hitako ny tena maha izy azy. Fotoana fohy talohan'izay dia lasa ahy koa ilay mpamadika. Ireto dia alika kely henjana izay mankafy ny fotoana filalaovana sy fotoam-pihavanana ary mora zatra. Tena manosika ny sakafo ka miaraka amin'ny cookie eo an-tananao no hanarahan'izy ireo anao na aiza na aiza! Niorina ambany tamin'ny tany izy nefa mafy sy tsy simba. Mieritreritra aho fa hahomby amin'ny ankizy izy ireo. Tena mamirapiratra indrindra izy ireo rehefa tsiroaroa. '
Blue the English Cocker Spaniel mitsako ny taolany
Kenny ilay mainty sy fotsy anglisy Cocker Spaniel
Zoie ilay Cocker Spaniel anglisy 8 volana avy any India eo am-pandriana.
Terry sy Koky zanak'alika anglisy Cocker Spaniel — Terry dia 2 ½ volana ary 4 taona i Koky.
Hijery ohatra hafa momba ny English Cocker Spaniel
English Cocker Spaniel Sary 1
English Cocker Spaniel Sary 2
Alika Spaniel Cocker anglisy: Sarivongana Vintage azo angonina
inona ny alika kely beabull
alika kely mpiady totohondry manana maso manga
anglisy bulldog lanja mitombo tanteraka
pitbull zaza fotsy sy fotsy